Ogaden News Agency (ONA) – Sanad-guurada 29aad ee Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadeenya (ONLF) oo Oslo,Norwey lagu qabtay.
Sanad-guurada 29aad ee Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadeenya (ONLF) oo Oslo,Norwey lagu qabtay.
Oslo: Waxaa si heer sare ah galabnimadi Sabtida oo ay taariikhdu tahay 17.August.2013, xarunta Jaaliyadda Soomaalida Ogaadenya ee dalka Norway, lagu qabtay munaasabadda Xuska Sanadguuradda 29aad ee aas-aaska Jabhadda Wadaniga Ogaadeenya (ONLF).
Heesta calanka kadib, waxaa munaasabadda oo ahayd mid aad looga soo shaqeeya ayaa waxaa ugu horeyn lagu furay hadal uu jeediyey, kusimaha Gudoomiyaha, ahna Xoghaya Jaaliyadda Mudane, Abdishakuur oo goobta kaga hadlay, qiimaha ay inoo leedahay xuska munaasabadda maanta la isugu yimid.
Mudane Abdishakuur ayaa kasoo qeyb galayaasha la wadaagay sharaxaadda iyo micnaha qotaha dheer ee uu ku qotamo ururka ONLF, middaas oo uu yidhi waa mid mideeyey markii koobaad shacabka Ogaadeenya, una jiheeyey wadada xornimada iyo gobanimada ay raadinayaan shacabkeena.
Sidoo kale, waxa taariikhda halgan iyo saameynta heer caalama uu ku leeyahay goobta kasoo jeediyey aggaasimaha xafiiska siyaasadda iyo deblomaasiyadda HAD ee JWXO Mudane Mohamed Dheeg. Muddanaha ayaa tibaaxay in Gumeysiga Itoobiya ay isku dayeen wax walba oo lagu dabar-goyn karo shacabka Ogaadenya, balse buu yidhi waxaa caqabad ku noqday ururka Wadaniga ah ee ONLF, oo isagu qaatay go’aamadii shacabku ku gaadheen inay masiirkooda ka tashadaan, islamarkaasna difaacaan qadiyadda Muqaddaska ah ee Ogaadeenya.
Mudane, Sakariye oo ah Madaxa Abaabulka & Arimaha Bulshada ururka dhalinyarada OYSU-Norway, ayaa ugu hambalyeeyey Jabhadda ONLF guushan taariikhiga ah ee ku saabsan aas-aaskii ururka.
Mudane Sakariye ayaa ballan ku qaaday inay kaga dhabeynayaan himilooyinka loo aas-aasay Jabhadda ONLF, islamarkaasna wax walba oo looga baahdo ay ku garab-istaagayaan Jabhadda.
Ugu dambeyntiina, waxaa si hannaansan goobta loo soo dhigay Keeg aad u qurux badan oo ururka Haweenka Ogaadenya, kusoo sharxeen Calanka iyo Astaanta ururka ONLF, middaas oo ay ku cabirayeen sida ay ugu faraxsan yihiin aasaaska ururka ONLF, oo waa cusub u iftiimiyey shacabka Ogaadeenya.